Qeerroon Ijoolen Oromoo Hara'as adaamfama jiru
Geetaachoo Alamaayyoo Tolassaa (eloo koo)
Qeerroon Wallaga Ammas Ari'ama jiru Manasibu fi Neqamtee irrati kan xiyeefate dha, Nekemte keessa Qeerroon 100 nannoo irra baqatani jiru. Manasibu amma hanga ammati jijjiramni tokko hin jiru OPDO Abayi Tsehaye fi Komandi Postitu biyya bulcha jira, qeerroon dararama jira.
Dargagoo Geetaachoo Alamaayyoo yeroo adda adda, bakka addaa addati (Mandi Bufataa Poolisi, Gimbi, Finfinnee fi Xolaayiti ) hidhame reebama ture, ABO ijara jirta, WBO gargaarta, Qeerroo Manasibu situ dura bu’uman qindeessa jeechun torch hama reebicha sukanessa irratti geggefameera. Qama qalibin miidhameera, qabeenya qabu dhabe jira, hiriyoota isaa fi warrii isaa waliin turan bakka isaan ga’an irra boodeti hafeera. Jiruf jireenyi isaa qabsoo Oromoof jeecha diigameera. Oromummaa koo malee waan naa hafee hin jiru jeedha dargagoon Geetaachoo Alamaayyoo.
Dargagoo Geetaachoo Alamaayyoo Amal qabeesa ummata Manasibu birra jalata, Degera fi Miseensa WFDO kan ta’ee dargagoota WFDO wara qindeesa fi soochoosa tura keessa isaa tokko bara 2014 soochi Qeerroo Manasibu keessati ga’ee Olana fi Namusa gudan namoota lammiif dhabatan keessa tokko ture, keesummati Addaa fi Artii Oromoo gudiisu keessati ga’ee guda nama qabu dha, Dargagoota Manasibuf fakkenya garii nama ture, nama saba isaa jalatu kanatu Komandipostiin jibame biyya ari'atamee rakkacha jira.
Yakka hin hojeetiniti yakkamee reebama ture, keesumati fanifamee reebame enyuu faa mal si gorse jedhanin qama isaa irrati rooroo gegesan qalbii isaa cabsuu yaadan, garuu diini itti hin milkofne jeedha Geetaachoon yeeroo hunda qaqaroo ijoolee Manasibu Qabsoo Bilisummaaf wareegaman akka Simoon Garba, Gutuu Caalii, Mitiku Wadajo, Soloman Tolesa, Faqadu Yadesa kkf yeeroon yadadhu dararami ana irra ga’ee ni darba jeedhen abdiin jira. Yakki ana irrati rawwate saba Manasibu mana hunda nama hunda irrati rawwatameera waga 27 darbana kana keessati, garuu Manasibun kan adda goodhu Hara ilee jijirami dhifee yeeroo Oromiyaan xiinoo araa galafate kana keessa nu biyya ari'atamun keenya, sabi keenya harasi mata ol qabachu dadhabee ijooleen isaa jirachu dadhabun ishee nama gadisisa jeedha.
Bara 2006 hiriira guddaa master pilanii qindeessuurraa eegalee hanga haraatti hidhamaafi ariyaatamaa akka jiru. Shororkeessaadha jedhamee waraqaan shororkeessumaa kennameefi, gara laafummaa tokko malee hidhani fi fannisaanii reebbuun eenyuu kan isiin ijaare ABO bakka kamitti ispoortii isin hojechiisa jechuun halkaniif guyyaa hiraarsaafi giddisaa turan . Ragaa tokko malee manasaa seenanii sakata'uun yoo dhaban hidhaatti gadi darbatu. Geetaachoo Alamaayyoo Tolassaa (eloo koo), namni kun hanga haraatti ariyatamee jira. Biyya isaati Binenesa ta'ee adamsama jira.
Kun suuraa mana hidhaa keessatti
Wayinni Gimbiitti 2006 ergasi si'a baayeef mana hidhaa aanaatti hidhameera. 2017 mana hidhaa Xoollayitti hidhamee galee utuu torban hin guutin mana erga sakataa'anii booda waan barbaadan dhabanii gara mana hidhaati gadi darbatan. 2018 humna tikka wayyaaneen ukkaamsuuf jennaan qeerroon harkaa baasaniiru. Yakki ana irrati rawwatamu yoomi dhabata? Nama itti iyyanu hin qabnu, hundi jijirame nama hin xuuqina jeedha mootumman waan Manasibuti rawwatamu garu falaa mootummaa Oromiyyati Aannaan hundi Mootummaa adda adda qaba lata?
Dargagoon kun dhamsi isaa “Jalqabaratti qabsoon amma irra jiru kan ittin maqaa wal hadheessinu osoo hin taane kan ittin wal cina hiriiree , wal utubnee bu’an isaa billisoomnu dha. Kanaaf garee gareen wal goodnee wal hammeessurra wal gorsuu furmaata.”jeedha
Ummani Manasibu yakki Dargagoota fi Qeerroo Manasibu irrati rawwatamu dhabachu qaba jeechun gaafacha jira haaluma kanan Dheengada ganda 04 mandiitti wal ga'ii ummata waamani turan. Gaaffii uummatni kaasees billisumaa billisumaa jettuwotii qeerroon manaaf hojii isaarraa maf ari'ama jechaa turan ummani Magaalaa Mandi fi Naannoo ishee?
Ilmaan Oromoo yoom illee wali isaa utubee diinarratti hiriiruudha malee wal irratti ka'uu miti. Yoo dogogorees walisaa wal gorfachuu, diinasaaf immoo yoommuu garaa laafuu hin qabu. Oduun biyya,tokkummaa diiga malee hin ijaaru.
OPDOn Manasibu fi Komandi Post garu waan mootumman Oromiyyaa hojeetu ala fala hojeeta jiru, ani yakka tokko malee biyya ari’atame bakkee bulan jira, Mootummaan Oromiyya garuu Oganoota ABO iyuu kabajan simatan biyya alati gacha jiru, ani Manasibu biyya kooti galuufn mirga dhabe jeedha qeerroo Oromoo Manasibu, Qeerroo Neqamte irra baqatan Finfinnee jiran ilee akkasuma qoorane isiinf dhiyeesina.
Mootummaan Oromiyya fi Mootumman Federala Dhaabbilee siyya biyya ala simacha jiran qeerroo Oromoo rakkate biyya isaa keessati jirati jireenya djhorkan biyya ariachun yakka yakka caaluu jeena. Qeerroon Oromoo biyya isaa irra ari’amun jeequmsa fida male bu’aa hin fiduu abban qabsoo qeerroon tufatame nami kabajamu hin jiru.
Jarsoliin Manasibu, Daldaltoon Manasibu, Dargagoon Manasibu bara baran, wagaa wagaan qe'ee isaan irra ari'atamun dhabachu qaba kun dhadannoo Oromoo hundati keesummati gaafi ummata Manasibuti.
Qeerroof qeerrantiin harka wal qabannee seenaaf biyya keenya haa jijjiiru.
Injifannoon kan uummata OROMOOTI !!!